AA အဖွဲ့ လာရာလမ်း
AA အဖွဲ့ လာရာလမ်း 4.5
ကျနော်တို့ Opera Mini Channel ကနေပြီးနေ့စဉ် စစ်သတင်းတွေ တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရူနားဆင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်..
သတ်တိ ရှိ ရငျ AA လို စဈတပျနဲ့ ခြ ပါလား
Author — santafelynn
ငါတို့က တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ နေပါတယ်
Author — Htun Myo
ဟား ဟား ဟား ပုဇွန်​​ခေါင်း​တွေ လိုင်း​ပေါ်တတ်​ငို​နေပါလား 😄😄😄
တျောတယျကှာ မအလ ထကျအမြားကွီးသာတယျ ငါတော့ ကာခြုပျခနျ့ခငျြလာပွီ😀
Author — Nay Aung
အထူ အပါး နားလညျပေးပါ တပျမတျော
တပျမတျော ဘောမ ဒေါကျတငျ အောငျမြိုး
ဦးအောငျမြိုး ဒေါကျတငျတာ ကွညျ့တာပါ ဒေါကျတငျ မကောငျးရငျ မွနျမာ တဈမြိုးလုံး ရနှေဈသမှောနျော
မောငျမောငျစိုးရေးတဲ့ စာအုပျတှဖေတျပွပါ ခိုငျမာတဲ့ ကြေးဇူးဘဲ
Author — sawzaw lae
မင်းအမေလိုး ပေါက်ကြတွေပြောနေတယ် ငါလီးရမယ်
Author — Chit Win Ko
လကျနကျကိုငျပီးအွေခာကျမလို ဖငျမွငိမျတဲ့ထှနျွးမတျနိငျက
ဘဂင်ျ​လီကုလားမြားရဲ့လီးအရသာ တှေပီးကိုယျလူမြိုး ကို
တခြိုရခိုငျမြားလညျးသိကပြါတယျ ထုတျ​ဖျောွေပာရငျသတျ
ခံရမာဆိုးလို့ မ​ဖျောထုတျရဲကသြာပါ အဲဒီထဲမာ aaထိပျပိုငျး
အွခားခေါငျးဆောငျ လကျတစုပျစာကို မလှနျဆနျရဲလို့သူတို့
ကြိုးအတှကျ ရခိုငျလူမြိုးမြားကို သေခိုငျးပီးအာဆာဘဂင်ျ လီ​အလိုကလြုပျ ပေးနေတာ​ပါ
ရေးရသာပါ ဒီထကျပိုသိခငျြ ရငျ​aaခေါငျးဆောငျမြားကို
တှေ့ရငျ မေွးကညျ့ပါ အဲဒီအ
ွေခာကျ တှေဘာွေပာမလညျး
Oversea Rakhine, like US, Canada, Australia, Japan and more, are donating / supporting secretally to AA. it is illegal action for the country that they live.
Author — Mi Mi
လီးမလို့ ပုံဘဲပြပီး ဖာသည်မ စက်ပတ်ကပ်နေတဲ့ပါးစပ်နဲ့ လျောက်ပြောနေတာလဲ ငါလိုးမသားဖာသည်မသား ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတဲ့ကောင် ခွေးမ်ျိုး
Author — Nay Min
Author — Story Story
မငျးတို. ဗမာတှေ အသားကို အစိမျး စားခငျြတာ
Author — mung mung
Comments ရေးနေကြတဲ့ဗဗာတွေ ဗဗာစာကိုတောင် ကောင်းကောင်းမှန်အောင် မရေးတတ်ပါလား😁😁😁😁
Author — SMOK ER
AA တပ် ကို ဘယ်က ရတဲ့ ငွေနဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ရတာလဲ
ခိုင်သုခ ၀န်ခံလာပြီဖြစ်တဲ့ ပလက်ဝ စစ်မြေပြင် က AA ကျဆုံးမူ
ရခိုင်ပဋိပက္ခ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး
မြောက်ဦးမြို့နယ် ကျေးရွာ ၅ ခုမှ ရွာသားများ ထွက်ပြေးကြရဟုဆို
ချင်းပြည်နယ်ကနေ ထွက်ခွက်ရန် AAကို ချင်းတပ်မတော် တောင်းဆိုသော်လဲ AA က မထွက်ခွာဘူးလို့ငြင်းလို့ တင်းမာ...
AA တပျဖှဲ့ဟာ မွနျမာပွညျတလှားမှာ တပျဖွနျ့နပွေီဘဲ ဖွဈတယျ